အသွေးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းရပြီ၊ | By His Blood We Are Cleansed! | Real Conversion
BY HIS BLOOD WE ARE CLEANSED!
လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်၌ ၂၀၁၈ခုနှစ်
ဇန်နာဝါလ ( ၂၈ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
ဟောကြားသော Dr. R. L. Hymers, Jr.၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
A sermon by Dr. R. L. Hymers, Jr.
Preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 28, 2018
“မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ ငြိုငြင် သောသူ၊ နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏။ သူတပါး မျက်နှာလွှဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံ လျက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ။” ( ဟေရှာ ၅၃း ၃ )
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာ ထိုနှက် ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ် စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍၊ သူခံရသော ဒဏ် ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၅ )
လွန်ခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေညက ခရစ်တော်၏အသွေးတော်လိုအပ်ချက်အကြောင်း တရား ဒေသနာတစ်ခုကို ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ( “အသွေးတော်အားဖြင့်လော သို့မဟုတ် အသွေး တော်မပါဘဲလား” )) တရားဟောချက်တွင် အချက်နှစ်ချက်ပါဝင်သည်။ ပထမအချက်မှာ ခရစ် တော်၏အသွေးတော် မပါဘဲ အသက်တာတွင် အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်နည်း။ ဒုတိယအ ချက်မှာ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို သင်ရရှိလျှင္ အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်နည်း။
ပထမအချက်၏အစပိုင်းတွင် စာပိုဒ်တိုတိုလေးဖြင့် ငရဲအကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါ သည်။ ထို့နောက် အခြားအချက်တစ်ချက်ကို အပြစ္ အကြောင်းတင်ပြထားပါသည်။ ခရစ် တော်၏အသွေးတော်မပါဘဲ “အပြစ္ထဲက လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိ။ အပြစ္မှ လွတ်မြောက်ခြင်းအ ခွင့်မရှိ။ အပြစ္မှ လွတ်လပ်မှုလည်းမရှိ” ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယအချက်ဆီသို့သွားပါ သည်။ “ယေရှု၏အသွေးတော်ရှိလျှင် အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်နည်း။” “အပြစ်ကိုဆေးကြော ရန်”၊ “အပြစ်ကိုပယ်ဖျက်ရန်”၊ “အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ရန်”၊ “အပြစ်မှ ကယ်နှုတ်ရန်”၊ “အပြစ်မှ လွတ်မြောက်ရသောအခွင့်ကိုရရှိရန်”၊ “အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ရန်”၊ “သင့်အား ကောင်းကင်ဘုံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန်” ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အကြောင်း အံ့ဩဘွယ်ရာ တန်ခိုးအကြောင်း ကို စာမျက်နှာလေးမျက်နှာအပြည့်ဖြင့် ပြောဆိုပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိနေသောသူများ က သူတို့သည် “ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခံကြရကြောင်း သီချင်းသီဆိုကြ မည်ဟုဆိုသည်။ Fanny Crosby ၏ ဓမ္မသီချင်းဖြစ်သည့် “သိုးသူငယ်အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းအကြောင်း” ကို ကျွန်ုပ်က ကိုးကားခဲ့ပါသည်။ Spurgeon က “အသွေးတော်မပါ သောဧဝံဂေလိသည်၊ နတ်ဆိုးဧဝံဂေလိအဖြစ်” ပြောဆိုချက်ကိုလည်း ကိုးကားထားပါသည်။ ချားလ်ဝယ်စလီ၏ အောက်ပါသီးချင်းကိုလည်း ကိုးကားထားပါသည်။
သူ့အသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အဆင်သင့်ရှိ။
( “ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဘာသာစကားအတွက်” Charles Wesley, ၁၇၀၇-၁၇၈၈ ).
ထိုဓမ္မသီချင်းကို သင့်အား သီဆိုစေလိုပါသည်။ ထိုနောက် သင်က “တန်ခိုးတော်၊ တန်ခိုး တော်အံ့ဘွယ်တန်ခိုးတော် ခရစ်တော်၏သိုးသူငယ်အသွေးတော်၌ရှိ” ဟုပါသည်။ (Lewis E. Jones, ၁၈၆၅-၁၉၃၆ ) တကယ်တော့ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် သီချင်းသီဆိုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ် သည် ၁၉ ရာစုက တရားဟောဆရာကြီး Octavius Winslow ၏ စာပိုဒ်ထဲကလည်း ကိုးကား ထားပါသည်။ “ခရစ်တော်ထံသို့ဒူးထောက်ပြီး အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်စိတ်နှလုံးကို ဆေး ကြောသန့်စင်စေပါ။ ၎င်းက သင့်အပြစ်အလုံးစုံတို့ကို ခွင့်လွှတ်မည်၊ ဖုံးအုပ်မည်၊ ပယ်ဖျက်ပေး မည်။” လူငယ်တစ်ဦးကို Spurgeon က “ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ထံသို့လာပါ။ သူသည် မြတ် သောအသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်အလုံးစုံတို့ကို ဆေးကြောပေးမူမည်” ဟုဆိုပါသည်။ ထိုသီချင်းဖြင့်သည့် “ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်အတိုင်း” ဓမ္မသီချင်းကို ကိုးကားသည်။ ထို့နောက် “ယေ ရှုကို ကိုးစားပါ။ ယေရှုထံသို့လာပါ။ ယေရှု၏မြတ်သွေးတော်ဖြင့် သင့်အပြစ်အလုံးစုံတို့ကို ဆေးကြောတော်မူမည်” ဟူသောစကားဖြင့် တရားဒေသနာကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သာ၍ စင် ကြယ်မှုရှိစေရန် အဘယ်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ။
တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ပိုင်းတရားဒေသနာတွင် မစ္စတာ John Samuel Cagan က “ခရစ် တော်၏မြင့်မြတ်ခြင်း” အကြောင်းကိုဟောသည်။ မစ္စတာ Cagan က ထိုတရားဒေသနာကို ကောလောသဲ ၁း ၁၄ ကိုးကားလျက် အဆုံးသတ်ထားပါသည်။
“သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားသည် သူ၌ ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ရရှိပါသည်။”
ထို့နောက် မစ္စတာ Cagan က “သူ့အသွေးတော်က သင့်အပြစ်တို့ကို ကျေအေးစေမည်။ သူ၏သနားခြင်းကရုဏာအပေါ် ပုံအပ်လိုက်ပါ။ သင့်အပြစ်ထဲက အသွေးတော်အားဖြင့် သူ သာလျှင် ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ယနေ့တွင် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံရန် ဆု တောင်းပေးပါ၏” ဟုဆိုပါသည်။ မစ္စတာ Cagan ၏တရားဒေသနာကို မစ္စတာ Griffith က “ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ၊ နာကျင်ဝေဒနာ” ပြီးနောက်တွင် ပေးထားပါသည်။ ၎င်းက ခရစ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် အသွေးသွန်းပူဇော်ခြင်းကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ည တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Griffith က “အသွေးတော်နှင့်ပြည့်သောစမ်း” သီချင်းကို သီဆိုမည်။ ၎င်းကို William Cowper က ရေးစပ်ထားပါသည်။
သို့ရာတွင် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်၏အပြစ်ဆေးကြောခြင်းအကြောင်း တရား ဟောခြင်းနှင့်သီချင်းသီဆိုခြင်းတို့အားလုံးတို့သည် ဤအကြောင်းအရာကိုကြားပြီး ပျောက်ဆုံး သောလူများစွာတို့အပေါ်တွင် ဖိအားလုံး၀ မရှိပါ။ လုံး၀ မရှိပါ။ ညနေပိုင်းတရားဒေသနာအပြီး တွင် မိန်းကလေးတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်ကို လာတွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်က “ဒူးထောက်ပြီး ယေရှုကို ယုံ ကြည်ကိုးစားပါ” ဟုသာပြောလိုက်သည်။ သူမသည် ကျွန်ုပ်ကို ဒေါသဖြင့်ကြည့်ပြီး “မဖြစ်နိုင် ဘူး” ဟု ပြောသည်။ ဒါကိုတော့ မယုံနိုင်ဘူး။ သူမသည် ကျွန်ုပ်ကို ဘာ့ကြောင့် လာတွေ့သ လဲ။ ကျွန်ုပ်ကိုလာတွေ့ခြင်းက သူမကို ကယ်တင္မည်ဟု ထင်ခဲ့ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် ဘိ သိတ်ခံရသောသူဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် လူငယ်လေးတစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်ကို လာတွေ့သည်။ မျက်နှာတွင် မျက်ရည်စက်များဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် အပြစ္ကိုသိမြင်တာဖြစ်နိုင် သည်ဟု ထင်မိသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ သူသည် ကျွန်ုပ်၏တရားဒေသနာတွင် ဖော်ပြရခဲသည့် ငရဲသွားဖို့ကို ကြောက်ရွံ့နေသော ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ငရဲသွား ဖို့ အရမ်းကြောက်ရွံ့နေပါသည်။ ထိုအကြောင်းသာလျှင်ဖြစ်သည်။ သူသည် သူကျူးလွန်သော အပြစ္အကြောင်း တစ်စုံတစ်ခုမျှ တင်ပြမထားပါ။ သူသည် စကားလုံး တစ်လုံးတပါဒမျှ ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိပါ။ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော္နှင့်၎င်း၏တန်ခိုးတော်က သူ့အပြစ်ကိုဆေးကြော သည် ဟူသောစကားလုံး တစ်လုံးမျှ မပြောဆိုပါ။ သူသည် တနင်္ဂနွေနံနက်ပိုင်း Cagan ၏ တရားဒေသနာမှစ၍ ညနေပိုင်း ကျွန်ုပ်၏တရားဒေသနာအဆုံး တစ်နေ့လုံး ယေရှုခရစ်အသွေး တော်၏ဆေးကြောခြင်းအကြောင်းကို ကြားခဲ့ရသော်လည်း တစ်လုံးမျှ မပြောဆိုပါ။ သို့ရာတွင် သီဆိုသောဓမ္မသီချင်းအ လုံးစုံကတော့ ယေရှုအသွေးတော်က အပြစ်အလုံးစုံကို ဆေးကြော သည်အကြောင်း ဖော်ပြမထားပါ။ သူသည် ယေရှုအသွေးတော်က ဆေးကြောခြင်းကို လုပ် ဆောင်န်ိုင်သည်ဟူသောအချက်ကို တစ်နေလုံး လုံးဝမကြားဖူးသည့် အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ သူသည် တစ်လုံးမျှ သတိမရသည့် သဘောသာဖြစ်ပါသည်။
ထိုမိန်းကလေးသည် ယေရှု၏ချစ်မေတ္တာအကြောင်းနှင့်အပြစ်အတွက် သွန်းလောင်း သောအသွေးတော်အကြောင်းကို တစ်စက္ကန့်တော် မတွေးတောဘဲ ဒေါနဲ့မောနဲ့ အဘယ့် ကြောင့် လာခဲ့သနည်း။ ထိုလူငယ်လေးသည် ယေရှုအသွေးတော်၏ အပြစ်ကိုဆေးကြောသန့် စင်စေနိုင်ခြင်းအကြောင်း တလုံးတပါဒမျှမပါဘဲ ငရဲကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် လာခဲ့ပါ သနည်း။ အဖြေမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမအခြေပြုကျမ်းတွင် ရှိပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
“မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ ငြို ငြင်သောသူ၊ နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏။ သူတ ပါး မျက်နှာလွှဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံလျက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ။” ( ဟေရှာ ၅၃း ၃ )
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ပျောက်သောအပြစ်သားသည် ယေရှုအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေသောအရာမှာ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးသောနိမိတ်လက္ခဏာသာ ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်သားသည် မိမိမျက်နှာကို ယေရှုထံက ဖုန်းကွယ်စေခြင်းမှ နိုးထမှုဖြစ်လာ ရန်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယအခြေပြုကျမ်းက သင်သည် ယေရှုနှင့်၎င်း၏ကယ်တင်သော အ သွေးတော်ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချငြင်းပယ်သည့်တိုင်အောင် သင့်ကိုကယ်တင်ရန် ယေရှုလုပ် ဆောင်ခဲ့သောအရာများအကြောင်းကို သင့်အား ပြောဆိုသည်။ သင်သည် သူနှင့်သူ့အသွေး တော်ကို ငြင်းပယ်နေသည့်တိုင်အောင် သင့်အတူ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာ ထိုနှက် ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်း သာကိုဖြစ် စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍၊ သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျက်ရှိ ကြ၏။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၅ )
မနေ့ညက ကျွန်ုပ်တရားမဟောခင်အထိ Spurgeon ၏ ဘုရားကျောင်းသို့တက် ရောက်သောလူငယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး၏သက်သေခံချက်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်မိသည်။ တစ်ဦးက ဤ သို့ဆိုပါသည်။
သူမသည် Spurgeon ၏ တရားဟောချက်ကို မကြားမှီတွင် စိတ် နှလုံးအလွန်မာကြောလျက်ရှိကြောင်း ဆိုပါသည်။ သူသည် ၎င်း ပြစ်မှားကျူးလွန်သောအပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်ကို အလွန်ကြောက်ရွံ့မိသည်။ သူမသည် ဘုရားကျောင်းသို့ ဆက် ဆက်လာသော်လည်း လပေါင်းများစွာ စိတ်ပျက်စရာများဖြင့် ကြုံ တွေ့နေခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် သူမသည် Spurgeon တရား ဟောသည်ကို ကြားခဲ့ရပြီး ယေရှုကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ငြိမ်းစေ သောအသွေးတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ကိုးစားသဖြင့် ဝမ်း မြောက်လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် ယေရှုတစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုး စားသဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်။
ဒုတိယမိန်းမငယ်လေးက ဤသို့ သက်သေခံပါသည်။
သူမသည် သိချင်စိတ်ပြင်းပြင်းပြပြဖြင့် မစ္စတာ Spurgeon ၏ တရားဒေသနာကို လာရောက်နားထောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် အသင်းတော်ကို ကြောက်သောစိတ်ဖြင့် ထားရစ်ခဲ့သည်။ သူမက “သူမတရားဟောတာကို လုံးဝမကြားလိုတော့ဘူး။ နောက်ထပ် ဘယ်သောအခါမျှ မသွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန် မသည် အဝေးသို့ရောက်နေလျှင် မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ပါ သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာ ယုံ ကြည်ကိုးစားသဖြင့် သူ၌သာ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်နှိမ့်သိမ့်ခြင်းကို ရရှိ ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းရှာဖွေခြင်းကို အခြားနေရာ၌ မဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်၌ ရှာဖွေမှသာလျှင် တွေ့ရှိရပါသည်။ကျွန်ုပ် သည် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့်၎င်း၏ကယ်တင်သောအသွေးတော်ကို မတွေ့ရှိမှီ တိုင်အောင် ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသောအရာမရှိပါ” ဟုဆိုသည်။
ရွေးနှုတ်ခံရသောသူများ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ထပ်ဆိုကို သီဆိုကြပါစို့။
ရွေးနှုတ်ခံရသူ၊ ရွေးနှုတ်ခံရသူ၊ သိုးသူငယ်အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခံရသူ၊
ရွေးနှုတ်ခံရသူ၊ ရွေးနှုတ်ခံရသူ၊ ကျွန်ုပ်သည် သူ့သားတော် ထာဝရဖြစ်ခွင့်ရ။
( “ရွေးနှုတ်ခံရသူ” Fanny J. Crosby, ၁၈၂၀-၁၉၁၅ )
ကျွန်ုပ်တို့အား ရွေးနှုတ်တော်မူသော ယေရှု၏အသွေးတော်သည် သာမာန်အသွေးမ ဟုတ်ပါ။ တမန်တော် ၂၀း ၂၈ တွင် ယေရှုအသွေးတော်သည် အဘယ်မျှလောက်ကြီးမြတ် သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူလေ့လာရပါသည်။ ရှင်ပေါလုက ဧဖက်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင် များအား ဤသို့ဆိုပါသည်။
“မိမိအသွေးတော္အားဖြင့်ရွေးဝယ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏အ သင်းတော်ကို ကျွေးမွေးလော့။”
King James ကျမ်းစာ ဘာသာပြန်ဆိုချက်သည် မှားယွင်းသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ထို့ နောက် New International ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကိုလည်း နားထောင်ကြည့်ပါ။
“မိမိအသွေးတော္ဖြင့်ရွေးဝယ်တော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင့်အသင်း တော်၏သိုးထိန်းဖြစ်လော့။”
သင်သည် လုံးဝနားမလည်သည်လည်းဖြစ်န်ိုငသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က New American Standard ဘာသာပြန်ဆိုကျမ်းကို ပေးထားပါမည်။
“မိမိအသွေးတော်ဖြင့် ရွေးဝယ်တော်မူသော ဘုရားသခင္႔အသင်း တော်၏သိုးထိန်းဖြစ်သည်။”
သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်သော ယေရှု၏အသွေးတော်သည် သာမာန်အသွေးမျိုးမ ဟုတ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို “ဘုရားသ ခင်၏အသွေးတော်” ဖြင့် အပြစ်မှ ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည် သုံးပါးတစ်ဆူတွင် သားတော်ဘုရားအနေဖြင့် ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူ့ဇာတိခံယူတော်မူ သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားပုံသဏ္ဍာန်ကို ခံယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အသွေးတော်ကို “ဘုရားသခင့်အသွေးတော်” ဆိုခြင်းမှာ လုံလောက်လှပါသည်။ ထို့ကြောင့် Spurgeon က “ခရစ်တော်၏အသွေးတော်က မဆေးကြောပေးနိုင်သော အပြစ်မရှိ” ဟုဆိုပါသည်။ ချားလ် ဝယ်စလီက ဤသို့ လှလှပပဆိုထားပါသည်။
( ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဘာသာစကားကျူးဧရန်”၊ချားလ်ဝယ်စလီ၊ ၁၇၀၇-၁၈၈၈၊
“အချင်းတံခါးသို့ဖွင့်ကြ” သံစဉ်ဖြစ်သည်။ )
သင်သည် အပြစ်ကျူးလွန်ထားခြင်းလုံးဝမရှိဟု ထင်မိပါသလား။ သင်သည် ချားလ် ဝယ်စလီ မပြောင်းလဲခင်က သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သလောက် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မည်ဟု မထင်ပါ။ သူသည် တစ်ရက်လျှင် အကြိမ်များစွာ အစာရှောင်ခဲ့သည်။ သင်ကော? သူသည် နာရီပေါင်း များစွာကို ဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့သည်။ သင်ဆုတောင်းပါသလား။ သူသည် အမေရိကန်အိန္ဒိယ လူမျိုးများထံ သာသနာသွားပြုခဲ့သည်။ သင်သွားမည်လော။ သူသည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ် သားတစ်ဦးဟု ဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။။ သူသည် Spurgeon ၏ အသင်းတော်၌ ဤသို့ဆိုသော မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်တူပါသည်။
ပထမတွင် အားလုံးကို ကြိုးစားကြည့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းရှာဖွေခြင်းကို အခြားနေရာ၌ မဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်၌ ရှာဖွေမှသာလျှင် တွေ့ရှိရပါသည်။ကျွန်ုပ်သည် ပထမဆုံး အနေ ဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့်၎င်း၏ ကယ်တင်သော အသွေးတော်ကို မတွေ့ရှိမှီတိုင်အောင် ငြိမ် သက်ခြင်းကို ပေးသောအရာမရှိပါ။”
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ အရာအားလုံး ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသလား။ သို့ရာ တွင် ထိုအရာက သင့်ကို ငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါသလား။ မပေးဘူးလား။ လုံးဝမပေးပါ။ သင် သည် ငြိမ်သက်ခြင်း လုံး၀ မရရှိပါ။ လုံး၀ မရှိပါ။ ငြိမ်သက်ခြင်း လုံးဝမရှိပါ။ သင်သည် အရာ အားလုံးကို အဆုံးသတ်ပြီး ကယ်တင်နိုင်သောအသွေးတော်ကိုလိုအပ်သည်ဟု ယေရှုထံဝန်ခံ ထားခြင်းမရှိလျှင် ငြိမ်သက်ခြင်း လုံး၀ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အခြား မိန်းကလေးက ဤသို့ဆိုပါသည်။
သူမသည် ဘုရားကျောင်းသို့ ဆက်ဆက်လာသော်လည်း လ ပေါင်းများစွာ စိတ်ပျက်စရာများဖြင့် ကြုံ တွေ့နေခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် သူမသည် ( နောက်ဆုံးတွင် ) Spurgeon တရားဟော သည်ကို ကြားခဲ့ရပြီး ယေရှုကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ငြိမ်းစေသော အ သွေးတော်ကို လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ကိုးစားသဖြင့် ဝမ်းမြောက် လျက် ရှိပါသည်။ သူမသည် ယေရှုတစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးစား သဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းရှာဖွေခြင်းကို အခြားနေရာ၌ မဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်၌ ရှာဖွေမှသာလျှင် တွေ့ရှိရပါသည်။ကျွန်ုပ် သည် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့်၎င်း၏ကယ်တင်သောအသွေးတော်ကို မတွေ့ရှိမှီ တိုင်အောင် ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသောအရာမရှိပါ” ဟုဆိုသည်။
ထို့နောက် John Samuel Cagan က “သူ့အသွေးတော်သည် သင့်အပြစ်ကို အဆုံးသတ်စေ မည်။ မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်တော်၏သနားခြင်းကရုဏာတော်ရိပ်သို့ ခိုလှုံပါ။ သူသည် အသွေး တော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ထဲက ကယ်နှုတ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ယနေ့တွင် ယေရှုကို ယုံ ကြည်ကိုးစားရန် ဆုတောင်းပဌနာပြုပေးပါသည်” ဟု ဆိုပါသည်။
“မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ ငြို ငြင်သောသူ၊ နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏။ သူ တပါး မျက်နှာလွှဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း ကို ခံလျက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ။ ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူး ခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာ ထိုနှက်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရ လေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်း သည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍၊ သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့ သည် အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၃၊ ၅ )
“အသွေးမသွန်းလောင်းပဲ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်မရှိပါ။” ( ဟေဗြဲ ၉း ၂၂ ) “သားတော်ယေရှုခ ရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်အလုံးစုံမှ ဆေးကြောပေးသည်ဖြစ်၍” ( ၁ ယော ၁း ၇ )) ဘုရား သခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယနေ့ညတွင် Charlotte Elliott ( ၁၇၈၉-၁၈၇၁ ) ၏ စကားလုံး သည် သင်၏ စကားလုံးဖြစ်ပါစေသော်။ သူမက ဤသို့ဆိုပါသည်။
အသနားခံခြင်းမရှိ၊ ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်အတိုင်း ဖြစ်၏၊
သို့သော် အသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် သွန်းလောင်းပေ။
ကိုယ်တော့်ထံသို့လာရန် ကျွန်ုပ်အား တောင်းဆိုခြင်းကိုပြု၊
ဘုရားသိုးသူငယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်လာပါ၏။ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ၏။
အသက် ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ် John Samuel Cagan က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ကျွန်မသည် ငြိမ်သက်ခြင်းပုံစံကို လုံး၀ ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ စိတ်ပျက် စရာခံစားချက်ကိုလည်း မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ရုန်းကန်နေ မှုအတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သမျှအ ပေါ် အရမ်း ပင်ပန်းနေမိသည်။ ကျွန်မ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကြိုး စားအားထုတ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ကိုးစားယုံကြည်ရန် ကြိုးစား သော်လည်း မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ။ မိမိက်ိုယ်ကို ခရစ်တော်ထံ မရောက်နိုင် ပါ။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာရန် ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ပါ။ မျှော်လင့်ချက် မဲ့စေပါသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အတွက် မိမိအသက်ပေးထားပါ သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံ ခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြောင်းက ကျွန်ုပ်ကို ကြေကွဲစေပါသည်။ အား လုံးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါသည်။ ယေရှုကိုသာပိုင်ဆိုင်ထားရပါ မည်။ ထိုအခဏချင်းတွင် သူ့ထံသို့ အသက်တာအပ်နှံပြီး ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုးစားလျက် ယေရှု၌ ခိုလှုံပါသည်။ သို့ဖြင့် သူသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်တော်မူသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်အပြစ်အလုံးစုံကို အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြော တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ခံစားချက်မလိုအပ်ပါ။ ခရစ်တော်ရှိ ပါသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော်ကို ကိုးစားခြင်းက ကျွန်ုပ်အပြစ် သည် ပယ်ရှားခြင်းခံရသကဲ့သို့ ခံစားစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အ ပြစ်အလုံးစုံကို စွန့်ခွါသွားပြီး ယေရှုကိုသာ မျှော်ကြည့်ပါသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်း သည် ယေရှု၌သာရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် ကျွန်ုပ်ကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်အား အသက်နှင့်ငြိမ်သက် ခြင်းကိုပေးပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ငါ့ထံသို့လာပြီး ထိုအတွက် ကြောင့် သူ့ကို စွန့်ပစ်မထားပါ။ သူသည် ကျွန်ုပ်အပြစ်အလုံးစုံတို့ ကို အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါသည်။
မှောင်မိုက်ထဲမှ ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကို နှုတ်ယူဖို့ရန်။
အမဲစက်တိုင်းကို အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောနိုင်သူ
ဘုရားသိုးသူငယ်၊ ကျွန်ုပ်လာပါ၏။ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ၏။
ကျွန်ုပ်အားလက်ခံ၊ ခွင့်လွှတ်၊ စင်ကြယ်၊ တက်ကြွစေ။
သင်သည် ယေရှုထံသို့လာပြီး သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်မှ ဆေးကြောခြင်းခံမည် လော။ သင်သည် ယေရှုထံသို့လာမည်ဆိုလျှင် သင့်အတွက် ဆုတောင်းပေးရန် စောင့်နေပါ သည်။ အခြားသူများ ညနေစာ အတူတကွစားဖို့ အပေါ်ထပ်သို့သွားစဉ်တွင် ပထမနှစ်တန်းသို့ လာပြီး ထိုင်ပါ။ အာမင်။
သင်သည် ဒေါက်တာ HYMERS ကို စာရေးသားပေးပို့လျှင် မည်သည့်နိူင်ငံကနေ ရေး သားပေးပို့သည်ကို ပြောပြရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် သင့်အား အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ် ပါ။ ဤတရားဒေသနာက သင့်အား ကောင်းကြီးပေးလျှင် ဒေါက်တာ Hymers ထံ အီးလ်မေးလ်ပေးပို့ပြီး ပြောပြပါ။ သို့သော် သင်၏နေထိုင်ရာနိူင်ငံကို ထည့်သွင်းရေး သားဖို့ မမေ့ပါနှင့်။ ဒေါက်တာ Hymers ၏ အီးလ်မေးလ်လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net (ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။ ) ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Hymers အား မည်သည့်ဘာသာဖြင့်မဆို စာရေးသားနိူင်သည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ် ဖြင့်ရေးနိူင်လျှင် ပိုကောင်းသည်။ စာတိုက်ဖြင့် ရေးသားပေးပို့လိုလျှင် သူ၏လိပ်စာမှာ စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် ၁၅၃၀၈၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လ်၊ စီအေ၊ ၉၀၀၁၅ ဖြစ်သည်။ ဖုန်းဆက်ပြီး စကားပြောလိုလျှင် (၈၁၈) ၃၅၂-၀၄၅၂ ဖြစ်သည်။
သငျသညျ ဒေါကျတာ Hymer ၏တရားဒသေနာကို အငျတာနကျပေါ်တှငျ
ဤတရားဒသေနာစာမူများသညျ မူပိုငျမဟုတျပါ။ ဒေါကျတာ Dr. Hymers ၏ခှင့်ပွုခကျြမလိုဘဲ စာအားဖှငျ့လညျး အသုံးပွုနိူငျပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ဒေါကျတာ Dr. Hymers ၏ ဗှီဒီယိုတရားဟောခကျြ
များကိုမူ ခှင့်ပွုခကျြဖွင့်သာ အသုံးပွုနိူငျသညျ။
“အသေခံသောသူ၏အသွေးတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း"၊ (S. J. Henderson , ၁၈၃၈-၁၈၇၆ ရေးစပ်သည်။ )